ဗာရာဏသီကျောင်းသားလေး: အမေများနေ့ အမေ့အကြောင်း
လူတိုင်းမှာအမေရှိသည် အမေသည် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော အရာတခု ဖြစ်သည်။အမေ နွေးထွေးပေးခဲ့သော အမေမေတ္တာတို့သည် မကုန်နိုင်။အမေ ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေဟာ ဘယ်လိုမှဆပ်၍မကုန်နိုင်ခဲ့။ပြာသိုလ်လပြည့်နေ့(အမေများနေ့တဲ့)ပြာသိုလ်လပြည့်နေ့ဟာ ဒီနေ့ရက်ဆိုတာကို သိခွင့်ရလိုက်သည်က မိမိ၏ အင်တာနက်ကိုဖွင့်လိုက်၏။အရှင်ကိတ္တိဇယ(ညောင်ကန်အေး)အားပြာသိုလ်လပြည့်နေ့က အမေများနေ့ ဘယ်တော့လဲဟု မေးမိ၏။ဟာ..ကိုနိုင်ငံခြားသားကြီးဒီနေ့ပြာသိုလ်လပြည့်နေ့ ဟူ၏။အမေများနေ့ဆိုပြန်
တော့လဲ အမေနဲ့စကားတွေပြောခြင်ပါဘိ.သို့သော် မိမိထားခဲ့သောဖုန်းမှာအမေနားမှာမရှိခဲ့.ဖုန်းနဲ့ အမေကို တွေ့ခြင်သည် စကားတွေပြောခြင်သည်..ဒါပေမဲ့ ပြောခွင့်တွေ့ခွင့်မရရှိခဲ့။ဒီနေ့တော့အမေနဲ့စကားတွေ
လဲ အစားအသောက်အဆင်ပြေရဲ့လား.အမေ ရေဒီယိုနားထောင်မိတယ်လေ ငါသားတို့နေတဲ့နိုင်ငံ ပေါ့ လေမုန်တိုင်းတွေတိုက်တယ်ငါသားရယ် အမေဖြင့်စိုးရိမ်လိုက်ရတာတဲ့ ။အမေ သားတို့နေရာမှာ မိုဃ်းတော့ရွာတယ် ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအမေ။သားနေကောင်းတယ်.အမေ .အမေရောဆိုတော့ လူကြီးဆိုတော့လဲ.မူးနောက်တာပါပဲ သား ရယ်တဲ့.အသက်ကြီးတော့ မူးနောက်တတ်တာပဲလေ။တဲ့..အမေ အသံကြားမိပြန်တော့လဲ ခွန်အားတွေတိုးလိုက်တာအမေရယ်လို့.။သားရဲ့ဆရာတော်ကလဲပြောနေတယ်သားရဲ့ သားကျေးဇူးတွေကြောင့် သားဆရာတော်ကပြောနေတယ် အိန္ဒိယနိုင်ငံ သံဝေဇနိယ၄ ဋ္ဌာန ဖူးခွင့်ရတယ်လို့ပေါ့။ထားပါတော့အမေ အမေနေကောင်းတယ်နော်။အမေကပြောတယ် အမေအတွက်အလှူတခုလုပ်ခြင်တယ်
အနေနဲ့ သားအမေရဲ့ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမှာပေါ့လို့ပြောမိတယ်။မလိုပါဘူးငါံသားရယ် အမေ့မှာသားတို့ဖေဖေနဲ့ လယ်ယာတွေရှိနေပါတယ် အမေ လယ်ယာတွေ ရောင်းပြီးသားအတွက်လဲအမှတ်တရတခု ကုသိုလ်ပြုခြင်တယ် ရွာကျောင်းလည်းကထိန်ခင်းမယ်လေ။သားသဘောတူလားတဲ့။ညီအကိုမောင်နှစ်မတွေရဲ့ဆန္ဒသည်လည်းသားရဲ့ဆန္ဒပါပဲအမေ..လို့ဆိုပြီးအမေနဲ့အတူ မမလေးတို့ညီလေး ညီမ
ကြားခြင်လွန်းသောအမေ့အသံသည် ဒီနေ့တော့ အမေအသံသည် အရင်ကနဲ့တော့မတူတော့ ဇရာဘက်သို့ ရောက်နေသောအမေအသံသည် ချိုမြိန်လှ၏.နာပျော်ဘွယ်တော့ကောင်း၏။ အမေရဲ့ ပါးရေ တွန့်နေသောအမေအသံ သွားကျိုးသံပါနေသော အမေ့အသံသည် သားအတွက် အေးမြစေသော အသံပါဆိုတာ အမေသိပါစေ အမေ။
အမေ အမေသည် အနှိုင်းမဲ့မေတ္တာတွေကိုသားဒီနေရာကနေ ပြန်လည်သက်သေပြုလိုက်ပရစေ အမေ။ အမေ့မေတ္တာဟူသည် အသဲနှလုံးကြားမှပေါက်ဖွားလာ၏။အမေသည်သားသမီးတိုင်းအပေါ်မှာ ထပ်တူညီမျှချစ်တတ်သည်။ဆိုးသောသားသမီးတွေအပေါ်မှာလဲ အချစ်မပြယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားတွေနဲ့ ချစ်တတ်ကြသည်သာ.။ငယ်စဉ်ကလဲအမေရဲ့ နို့ရည်သောက်သုံးနေစဉ်မှာ မျက်စိကိုဖြဲ ပါးကိုဆွဲကာ ဆံပင်ကိုကုတ် ပါးကိုပုတ်ပေမဲ့လဲ
အချစ်မပြယ်တိုး၍ချစ်နေမိတာအမေပါ။ နိုချိုတိုက်ကျွေးနေစဉ်မှာ အမေရဲ့နို့ကို ပေါက်ခါစ သွားလေးတွေနဲ့ကိုက်ခဲ့တာတောင် ဒေါသမပြယ် ခွင့်လွှတ်ခြင်းကရုဏာတရားတွေနဲ့ခွင့်လွှတ်သီးးခံပြီးချစ်ခဲ့တာမွေးမေမေပါ။
‘’ အိုနေပေမဲ့ပျိုနေဆဲပါ မွေးမေမေ’’
ယနေ့အမေသည် အသက်(၈၀) သို့ရောက်လို့ဇရာဘက်သို့ ရောက်နေပြီဆိုတာ အမေရဲ့ သွား အမေရဲ့ခါးတွေတွေကသက်သေပြနေပြီ အမေ။ဒါပေမဲ့အမေသည် သားရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ အမေဟာ အိုပေမဲ့ အမေရဲ့မေတ္တာဓါတ်တွေကရုဏာတရားတွေက အိုပေမဲ့ပျိုနေဆဲပါလို့ မိဘမေတ္တာ အိုသည်မရှိတဲ့ အမေ။အမေ ကိုသားအမြဲပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားလေ ဥပုသ်စောင့်မြဲသောအမေ ဖြစ်ပါစေဆိုတာလေ.သီလမြဲရင်အသက်ရှည်တယ်လို့ လိုရင်းလေးကိုပြောခဲ့ပါတယ်အမေ။သားရဲ့စကားကြောင့် အမေ ဥပုသ်သီလစောင့်ထိန်းရတယ် ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ သားယုံကြည်မိပါတယ်အမေ.ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀လေးကိုပြန်တွေးကြည့်မိတိုင်း အမေဟာ ခုမှသာမဟုတ် ခု သားတို့ရပ်ရွာဆရာသမား သားသိသမျှ ၃ ပါးမြောက်ခဲ့ပြီလေ.အမေ ဥပုသ်စောင့်သွားလေတိုင်း ပါအောင်ခေါ်တတ်တဲ့အမေ ဟာပါရမီဓါတ်ခံလေးတွေပေးတဲ့သဘောနဲ့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ မမေ့နိုင်ခဲ့ပါဘူးအမေ
ဒါနမှုဆိုတာ တိုက်တာအဆောက်ဦးတွေမလှူခဲ့သော်လည်း အမေရဲ့ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့
ဒါနမှုတွေအမေသိသလို အမေရဲ့ကိုယ်စောင့်နတ်တွေလဲသိနေမှာပါအမေ။သီလ ဆိုတာလဲ အမေစွမ်းနိုင်သလောက် ဥပုသ်သီတင်းတွေဆောက်တည်လို့နေခဲ့ပြီလေ.သားသိတတ်တဲ့အရွယ်ကစပြီး အဖိတ်နေ့ ဥပုသ်နေ့တွေမှာ အမေ စောင့်ခိန်းလာခဲ့တဲ့နှစ်တွေဟာ အနှစ် ၄၀ သို့ တော်တော်ကျော်လာခဲ့ပြီဆိုတာ အမေ သိမှာပါ ။ဘာဝနာမှုဆိုတာလဲ အမေရဲ့ ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ်ပြီးလို့အမေရဲ့မေတ္တာသံတွေဟာလည်း သားအာရုံမှာ ကြားကြားနေမိတယ်လေ။ အမေဇရာဘက်သို့ ရောက်နေချိန်မှာအမေအတွက်ကတော့
ဒါန.သီလ.ဘာဝနာ ကိုသာ အမေအစဉ်တမ်းတနေပြီးအမေနေထိုင်ပါ။အထူးသဖြင့် မေတ္တာဘာဝနာကိုတော့နေ့စဉ်ပွားများပါ။မေတ္တာသည် လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ကြ၏။
မေတ္တာလက်နက်သည် အရာရာအောင်မြင်သည်သာ။တခါက သက်သေတခု အမေ့ကိုပြခဲ့ပြီလေ။ အမေ့စည်းစိမ်တွေကုန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ လူတဦးတယောက်ရဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကား။ကံနိမ့်နေချိန်မှာ အမေရဲ့သားငယ် မထင်မှတ်တဲ့ကံကြမ္မာဆိုးတခုကြောင့် ရုံးကန္နားတွေရောက်ခဲ့တဲ့လေ။ တကယ်တော့ လုပ်ကြံတခု ခံခဲ့ရတယ်လေ အမေ။ ကံကြမ္မာကလဲ အမှားအမှန်ဝေဘန်ပေးခဲ့လို့ လုပ်ကြံခဲ့တာ သားရဲ့အမေ ရုံးတွေ မှာ ဘာတပြားတချက်မှ မကုန်ခဲ့ဘူးလေ။ သားပြောခဲ့တယ်လေ အမှန်တရားဟာ အမှန်တိုင်းပဲရှိမယ်ဆိုတာလေ။အမေ မေတ္တာကိုသာ ပို့ပါ လို့ မမကြီး မမလေးတို့ရဲ့ ဒေါသအဟုန်တွေ ဟာအဲဒီနေ့က တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ဖြစ်နေချိန်မှာ သားပြောတာက မေတ္တာသာပို့ပါ မိမိအပေါ်ကျိန်ဆိုခဲ့သမျှတွေ သူတို့လဲ မကျရောက်ပါစေနဲ့လို့လေ။တကယ်တော့ အဲဒီတုန်းက အမေ့မှာ ဘာပစ္စည်းတွေကုန်ခဲ့သလဲ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ.။အမေ ရဲ့ကိုယ်စား အမေ့အပေါ် ကျိန်ဆိုခဲ့တာတွေဟာ..တကယ်တော့ အမေ သိလောက်ပါပြီလေ.။။အမေ့မှာ ဘာတခုဘာတွေ ကုန်ဆုံးခဲ့သလဲ.အမှန်တရားဆိုတာ ကံကြမ္မာကပဲ သက်သေပြခဲ့တယ်လေ အမေ။ ဒါ့ကြောင့် မေတ္တာကိုအကြိမ်ကြိမ်ပို့သနိုင်အောင်အမေကြိုးစားပါလို့..။
မှတ်မှတ်ရရ(၁၃၄၂)ခု တောရွာလေးကိုစွန့်ပြီး မြို့ဒေသသို့ စာသင်ထွက်တော့ဖခင်ကြီးက ကျမ္မာရေးကမကောင်းလှ သို့သော် ပညာသင်သွားရမည်ဆို၍ ပီတိဖြစ်နေမိ၏။ကလေးဘ၀မှာ မြို့သို့ပညာသင်သွားရဘို့အရေး ဘဒွေးတော်သူမှ လိုအပ်သောသေတ္တာ စောင်ချဉ်ထောင်.သင်္ကန်းအစရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကားဝယ်ပြီးခဲ့ချေပြီ။အမေသည်ထုံးစံအတိုင်း သားအဖေလဲကျမ္မာရေးကကောင်းတာမဟုတ်ဘူး.နောက်နှစ်မှသွားပါလားကွယ်တဲ့။
သို့သော် တား၍မရခဲ့.။အမေရဲ့စကားတခွန်း အေးပေါ့လေ.အမေတို့မှာ စာမသင်ခဲ့ရဘူး။ကျေးရွာမှာ(အ.သုံးလုံး)သင်တန်းတတ်ပြီး သေစာ ရှင်စာကိုသာတတ်ခဲ့ရတဲ့အမေ။အမေသည်စာမတတ် သို့သော် အမေသည် သားအတွက်ပညာပါရမီဓါတ်တွေပေးရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပြီပေါ့။ထုံးစံအတိုင်း အမေရဲ့ပါးစပ်မှတဖွဖွမှာလေတော့၏။ကျမ္မာရေးဂရုစိုက်ဘို့။ခလုတ်မထိပါစေနဲ့..ဆူးလဲမညိပါစေနဲ့..တဲ့ စာလဲကြိုးစားသင်ပေါ့.တဲ့ ပေးလိုက်တဲ့ဆုတွေတပုံတပင်ကြီးပေါ့။
ဒိလိုနဲ့မြို့မှာ စာသင်ရင်းနဲ့အချိန်တို့သည် တဖြေးဖြေးကုန်လာခဲ့၏။ မိမိစာသင်ထွက်လို့တလပြည့်တဲ့နေ့မှာပဲ ကျွေးဖေဖေ တယောက်ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ခဲ့သည်တဲ့။မိမိမှာစာသင်နေချိန်မို့ စာသင်ပျက်မည်စိုး
၍ အကြောင်းလဲမကြား သတင်းလဲမပို့ခဲ့။ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ တယ်လီဖုန်းနဲ့ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းသိနိုင်ခဲ့၏။သို့သော် အဲဒီအချိန်မှာ ဖုန်းဆိုသည်မှာရှိတော့ရှိ၏။သို့သော်မိမိ၏စာသင်တိုက်မှာဖုန်းမရှိသေးပါ။ ဒီလိုနဲ့ ရာသီတို့သည်ပြောင်းလဲလို့လာခဲ့ချေပြီ ။ဥသြငှက်တို့အလွမ်းသီချင်းသံပြိုင်သီဆိုနေချိန် ပင်အိုတွေကမွဲပြီး..ရိုးတံတို့သည်လည်း ခပ်ကြဲကြဲ တောင်လေးလေးက ခပ်သုတ်သုတ် အော် နွေရာသီကိုတောင်ရောက်လို့ စာဖြေရတော့မှာပါလားဆိုပြီးအတွေးတွေနဲ့ ကျေးဇူးရှင် မိဘနှစ်ပါးနဲ့တွေ့ရတော့မည့်အရေးတွေးပြီး စာပေကိုကြိုးစားပြီးကျက်မှတ်ပြီးစာဖြေပြီးလို့ကျေးရွာသို့အပြန် အလာကောင်းခဲ့ပေမဲ့လဲ
အခါနှောင်းခဲ့လေပြီပေါ့.။ကျေးဇူးရှင်ကျွေးဖေဖေတယောက်မိသားစုနဲ့စွန့်ခွာလို့သွားခဲ့လေပြီ။မိမိလည်းကလေးဘ၀ မျက်ရည်တွေပြိုင်ပြိုင်ကျပြီး လွမ်းစိတ်ကို စာပေနဲ့ဖြေသိမ့်ခဲ့ရတယ်ပေါ့။ကျွေးဖေဖေတယောက်ပြောသွားသည်တဲ့ အော် ငါ့သားသူ့ပညာရေးအတွက် တားသည်ကိုပင်မရဘူး.အေးလေ ငါ့သားပညာတတ်ကြီးဖြစ်ပါစေတဲ့..ခုတော့လဲ ကျွေးဖေဖေရယ် ပြောလိုက်ခြင်ပါဘိ.။သားတယောက် ဘွဲ့ ဒီဂရီလေးတွေရလို့ အဖေ သာရှိနေခဲ့ရင် ဆိုပြီး မျက်ရည်တို့သည်မျက်နှာပေါ်မှာရစ်ဝဲလို့.ခုတော့လဲ ကျွေးဖေဖေရဲ့နောက်ဆုံးဈာပနကိုတောင်ပို့ခွင့်မရ လွမ်းခွင့်မရတဲ့သားတယောက် ကျွေးဖေဖေတယောက် ရောက်ရာဘ၀ ဘုံဋ္ဌာနကနေ အဖေသာဓုခေါ်နိုင်အောင် အဖေအတွက်ကုသိုလ်ထူးတွေလုပ်ပေးခဲ့တာအကြိမ်ကြိမ်ပါ။အဖေ့အတွက် ရပ်ရွာပဋ္ဌာန်းရွတ်သံဃာတော်တွေ ဆွမ်ကပ်ခဲ့တာ (၅)နှစ်ဆက်တိုက်ပါအဖေ လို့.။ခုလဲ သားအိန္ဒိယနိုင်ငံပညာသင် မလာခင်ပဲ အဖေအတွက်အမှတ်တရ ကုသိုလ်တခုအိမ်သစ်တတ်မင်္ဂလာ.ဘုရားအနေကဇာတင်မင်္ဂလာ.နှင့် အိမ်အတွက်အန္တရာယ်ကင်းစေရန် အိမ်မှာပဲ ပဋ္ဌာန်းတညတာရွတ်ဖတ်ပြီး နောက်နေ့မှာ အဖေ မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်း သွားလေရာ အမေ အနားမှာရှိနေအောင်အမေ့ခြေရာလေးတောင် အမေ့ခြေရာခံယူပွဲလေးတခုပြုလုပ်ခဲ့ပါ
သေးတယ်.။အဖေရောက်လေရာဘုံဘ၀ကနေ အဖေ သာဓုခေါ်နိုင်ပါစေ..လို့.။
အမေ.အခြားအခြားသောသားသမီးတွေက အမေ့ရဲ့အနားမှာအနီးကပ် အမေရဲ့နို့ဘို့လေးတွေကျေပြွန်အောင် ကျေးဇူးဆပ်နေကြတယ်အမေ။အမေရဲ့ဝေယျာ
၀စ္စတွေနဲ့ထပ်တူပေါ့။သားကတော့ ဘုရားရဲ့သားတော်ဖြစ်နေတာကြောင့် ဓမ္မနဲ့ပဲကျေးဇူးဆပ်ခွင့်ပြုပါအမေ။။။ဗုဒ္ဒစာပေတွေကိုလေ့လာရင်းနဲ့တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အမေ့ကိုကျေးဇူးဆပ်နည်းတဲ့ (အင်္ဂုတ္တိုရ်)မှာတွေ့ခဲ့ရတယ်လေ။ ကျေးဇူးဆပ်တယ်ဆိုတာ ပါးစပ်ကကျေးဇူးဆပ်ရုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူး အမေ အခု သားကတော့ အမေ့ကို “ဓမ္မနည်းလမ်း”ဖြင့်ကျေးဇူးဆပ်မှာပါအမေ။တကယ်လဲ အမေ့ကိုပြောဘူးဟောဘူးတဲ့တရားလေးပါ။ တနေ့ သားကြိုက်တဲ့လဘက်ခွက်လေးကို အမေကိုယ်တိုင်သုတ်ပြီး ဆီတွေပေနေသော နှမ်းတွေကျန်နေသောအမေဟာ ပေလက်စ လက်နဲ့အမေ လာကပ်ရင်း အမေ့ကိုလက်သုတ်ပုဝါလေးပေးပြီးအမေ့ကို ဟောခဲ့တယ်လေ.သားရဲ့ရှေ့တည့်တည့်မှာ အမေ ကထိုင်လို့ အမတို့တွေကလဲ အမေ့ရဲ့ဘေးမှာ ကပ်ထိုင်လို့ပေါ့..။
အသိပညာမရှိသေးသောမိဘနှစ်ပါးအားအသိပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်။…တဲ့ သားတို့ မြတ်စွာဘုရားက အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်မှာ ဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်အမေ။ သားလဲ သားသိထားတတ်ထားတာလေးတွေကို အမေ့ကို ပြန်လည်ဖောက်သည်ချလို့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စား အမေ့ကို ပြန်လည်ကျေးဇူးဆပ်နေတာပါ.။
အမေ သဒ္ဒါတရားမရှိဘူး။အမေ သီလမရှိဘူး။အမေ ပေးကမ်းမှုမရှိဘူး။အမေ အသိပညာမရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးအမေ။ အမေရဲ့သန္တာန်မှာရှိသင့်၇ှိထိုက်တဲ့ သဒ္ဒါတရားတွေ.သီလတရားတွေ.စွန့်ကြဲမှုတွေအမေသန္တာန်မှာရှိနေပြီးသားတွေပါ အမေ။ဒါပေမဲ့အမေတို့မှာ..။အသိပညာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးပြောစရာလေးတော့ရှိနေတယ်အမေ လို့…။အဲဒီအချက်ကတော့အခြားမဟုတ်ဘူး။ အယူလေးတချက်လွဲမှားလိုက်တာနဲ့ ငရဲထိပို့ဆောင်နိုင်တယ်အမေ..။သားတို့ရဲ့ရွာရဲ့အနောက်ဘက်မှာ ပခန်းဦးမင်းကျော်ဆို
တာအမေသိမှာပါ။ အဲဒီနတ်တွေဟာ တကယ်တော့ သာသနာပတွေပါ အမေ။ သားတို့ရွာမှာ ငယ်စဉ်က နတ်ကနားပွဲတွေလုပ်ခဲ့တယ်လေ။ဆိုင်းသံဘုံသံကြားရင်ကလေးတို့သဘာဝ သွားပြီးကြည့်ခဲ့ရတယ်လေ.။ ယောက်ျားကနေ မိန်းမအ၀တ်ဝတ်ပြီးကကြခုန်ကြ မိန်းကဖြစ်ပြီးအရက်ပုလင်းကြီးငေါ့လို့ မူးပြနေတယ်လေ။ ဒါကိုပင် ဘေးမှလူအချို့က လက်အုပ်တွေချီပြီး လိုခြင်သောဆုတွေတောင်းလို့ပေါ့။ ကိုရွှေဆိုင်းသမားကလဲ လက်စွမ်းတွေပြလို့ ကြည့်လို့တော့အကောင်းသားပဲ။သားတို့က ကလေးဆိုတော့ ရှေ့ဆုံးနားမှာနေရာယူလို့ပေါ့။ဘာနတ်ရယ်တော့မသိဘူး.ငှက်ပျောသီးကြီးပါးစပ်နဲ့ကိုက်လို့ တောင်ကြည့်မြောက်ကြည့်ပေါ့။သားတို့ကလဲ အနားမှာဆိုတော့ သားတို့ပေးမယ်အထင်နဲ့လက်ဝါးတွေခံလျှက်သားလေ။ဒါပေမဲ့.တကယ်တော့ ဘာနတ်ရယ်တော့မသိဘူး သားသိလိုက်တာတော့အမျိုးချစ်နတ်လို့ထင်မိတယ်လေ။ တောင်ကြည့်မြောက်ကြည့်နေတာက သူ့အမျိုးရှာနေတာလေ။သားရင်ထဲတေးမှတ်လိုက်တယ်လေ အမျိုးချစ် နတ်လို့ပေါ့။
သားတို့ကျေးရွာမှာ ဘာလေးမဖြစ်လိုက်နဲ့နတ်ကတော်ခေါ်မေးကြတယ်။တကယ်တော့ သူတို့သာ အမှန်တိုင်းဟောတတ်နေရင် ဘာလို့နတ်ကတော်ဆိုတာလုပ်နေမှာလဲ..။သူ့ဇာတာသူကြည့်ပြီး ငွေမရှားရွှေမရှားနဲ့နေမှာပေါ့။သားတို့မြန်မာလူမျိုးတွေအားနည်းချက်ကဒါပဲ အမေ..။စူးစမ်းဆင်ခြင်မှုမရှိကြဘူးလေ။ ခေတ်သစ် လူညာတွေပါ။ တလောက ဇာတ်ကားတကားကြည့်မိတယ်လေ။ နတ်ကတော်မစောတဲ့.။မို့မို့မြင့်အောင် ကားပေါ့.။ပြောလိုက်တာအမှန်တွေပဲ မှန်မှာပေါ့ အထောက်တော် ကအမြဲ အရက်ဖိုးရလို့ ဖားထေးပေးနေတာ.။မှားဟောပြန်တော့ .ရှေးဘ၀ကတဲ့.။နောက်တော့မှ အော်.နတ်ကတော် နတ်ကတော် တကယ်တော့ ညာစားနေကြပါလားဆိုပြီးတယောက်ထည်းတွေးပြီးရီနေမိတယ်ပေါ့ အမေ။အမှန်တော့
ဒါတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အပေါ်မှာအားနည်းချက်ကိုရှာပြီး ခေတ်သစ်ညာစားနည်းတွေပါ လို့ပြောပရစေ အမေ။အသေဆိုးနဲ့သေခဲ့ရတဲ့ နတ်ရုပ်တွေကို ဦးချနေတာ ရှိခိုးနေကြတာတွေဟာ တကယ်တော့ သူတို့ကသာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဒဘာသာဖြစ်တဲ့အမေတို့လို့ လူတွေကို ဦးချသင့်တာလေ သူတို့မှာ ဘာသီလရှိလို့လဲ။ဘာကုသိုလ်ပြုခွင့်ရှိလို့လဲ။ တကယ်လို့ အသေဆိုးနဲ့သေခဲ့ကြရတဲ့ နတ်တွေကို ရှိခိုးဦးချပြုလုပ်မိရင်တော့ မှားလိုက်တာမှမဟာအမှားကြီးအပါယ်ထိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့အမှားပဲ။မိမိက ဗုဒ္ဒံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ ဘုရားကို ကိုးကွယ်ပါ၏။တရားကို ကိုးကွယ်ပါ၏။သံဃာကိုကိုးကွယ်ပါ၏။ဆိုပြီး ရွတ်ဆိုထားတာ ကိုးကွယ်ထားတာ မိမိထက်နှိမ့်ကြသော နတ်မိစ္ဆာကို ရှိခိုးမိတော့ မဟာအမှားအပါယ်ထိရောက်စေနိုင်တဲ့အမှားပါ အမေ။
အညသတ္ထာရာဒီသု အဟံ အတ္တာနံ ပရိစ္စဇာမိတိ.ဧ၀ံ အညသတ္ထာရုဒ္ဒေသ၀သေန သာဝဇဘေဒေါတိ ၀ုစ္စတိ။(မူလပဏ်ဏာသအဋ္ဌကထာ)
ဘုရား.တရား. သံဃာ မှတပါးအခြားသော ဘိုးတော်.မယ်တော်.နတ်စိမ်းရုပ်များအပေါ်၌ တပည့်တော်ရဲ့အသက်နဲ့ခန္ဒာကိုယ်ကို အရှင်ကောင်း အရှင်ကြီးတို့အားအပ်နှင်းလှူဒါန်းပါ၏။ ပြောဆို ရှိခိုးဦးချလျှင် သရဏဂုံ သည် ပျက်တော့၏။ဤ သို့ သရဏဂုံပျက်ခြင်းကြောင့် အပြစ်ရှိသောသရဏဂုံပျက်ခြင်းမည်၏။ဗုဒ္ဒဘာသာ တဦးတယောက်သေလိုက်တာနဲ့ သရဏဂုံသည်ပျက်၏။ဤသို့ပျက်ခြင်းကားဓမ္မတာဖြစ်ခြင်းကြောင့် အပြစ်မရှိသောပျက်
ရတနာမြတ်သုံးပါးမှတပါးအခြားသောဘိုးတော် မယ်တော်စတဲ့နတ် ရုပ်များကို ဦးချမည်ဆိုလျှင် သရဏရုံသည် ပျက်၏။သရဏဂုံပျက်ခြင်းကြောင့် ငရဲသို့ကျရောက်မည်မှာ ဧကန်မုချ။ လူဆိုတာ မြင့်မြတ်တယ်။ ဒါနမှု သီလမှု ဘာဝနာမှု ပြုခွင့်ရတယ်။ပြုခွင့်ရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားသည် ရခဲလှတဲ့တရားထဲမှာ”မနုဿတ္ထဘာဝေါ ဒုလ္လဘော”တဲ့ လူအဖြစ်ဆိုတာရခဲပါတယ်တဲ့။ရတဲ့အချိန်လေးမှာ အယူလွဲမှား နေရင်တော့ ရခဲလှတဲ့လူအဖြစ်ကို ရတုန်းလေးအသိဥာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီး သတိတရားကပ်နိုင်ပါစေ လို့
စေတနာမေတ္တာအနန္တဖြင့် ပြောကြားပရစေ။ အမေ ရေ။ လူ့အဖြစ်ဟာရခဲပုံလေးတခု ပြောပရစေ. လူအဖြစ်ဆိုတာရခဲတယ် ရခဲတဲ့အခိုက်မှာ ဒါနမှု ပြု သီလမှုဆောက်တာည်ဘာဝနာမှုတွေပွားများကြရမယ်.။သာသနာ့အမွေတောင်ခံယူနိုင်ကြပါတယ်။ ဟိုး အထက်ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ သကြားမင်းမဟာဗြဟ္မာမင်း တွေဟာ သာသနာ့အမွေ ပြုခွင့်မရှိကြပါဘူးအမေ။ လူပြည် လူဘုံမှာ မည်သည့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမဆို ပြုခွင့်တွေရတယ်လေ အမေ။ ဒါတွေကိုထောက်ဆပြီး မနုဿတ္ထ ဘာဝေါ ဒုလ္လဘော လို့ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာပဲလေ အမေ။
ဒါ့ကြောင့် အမေ .မှားယွင်းစွာ ပြုလုပ်ခဲ့သည်တို့ကို အမေ ရှေ့မှာ အမေ့ကို အသိတရားလေးနဲ့ယှဉ်ပြီး အမေ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်ကန်စွာ အသုံးပြုပါစေ အမေ။အမေ ရဲ့ ရိုးရာတွေ မပြုလုပ်ပါနဲ့လို့ မတားရက်ပါ တင်မြောက်ပသပါ.။ဒါပေမဲ့အရိုအသေပေးမှုကိုတော့မပြုလုပ်ရန် သတိကပ်ထားပါ။ မေတ္တာတော့ပို့ပါ အမေ ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတွေကိုတော့ (၃၁)ဘုံသားအတွက် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါ။မေတ္တာသည် အထက်ကပြောခဲ့သလိုပေါ့။မေတ္တာပို့သခြင်းဖြင့် အရာရာအောင်မြင်နိုင်ပါစေ လို့.။
အမေများနေ့ မဟုတ်သော်ငြားလည်း အမေမျယးနေ့ကို အမှတ်တရအဖြစ်။အမေ့အကြောင်းလေးအဖြစ် ဤ SPOT ကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်ဆိုတာ..။
Posted by ဗာရာဏသီကျောင်းသားလေး at 10:19 AM